पोर्टेबल GIS, USB बाट सबै - Geofumadas
सेप्टेम्बर, 2009 जियोस्पाटियल - जीआईएस, GvSIG, qgis, uDig
पोर्टेबल जीआईएसको2संस्करण रिलीज गरिएको छ, बाह्य डिस्क, एक USB मेमोरी र डेस्कटप र वेब तहमा स्थानिय सूचना व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू पनि आवश्यक कार्यक्रमबाट निष्पादित एक सरल अनुप्रयोग।
यो कति वजन हुन्छ?
स्थापनाकर्ता फाइलले 467 एमबीको वजन पाउँछ, तर यसले यसलाई कम्तिमा 2GB खाली गर्न आवश्यक छ, यसलाई स्थापना गर्नका लागि, किनकि एक पटक जगेडा र 1.2 GB चलिरहेको आवश्यक ठाउँ हिँड्छ।
यसमा के कार्यक्रमहरू समावेश छन्?
यो आश्चर्यजनक छ कि यसले के गर्छ, पछि USB मेमोरीबाट निम्न कार्यक्रमहरू क्रियान्वित गर्न सकिन्छ:
डेस्कटप जीआईएस सफ्टवेयर
क्वांटम जीआईएस (1.02)
PostgreSQL (8.4.01) (PgAdmin III र Psql उपकरण)
वेब सेवाका लागि कार्यक्रमहरू:
MySQ डाटाबेस सर्भर
पोस्टग्रे SQL डेटा सर्भर
अतिरिक्त अनुप्रयोगहरूको रूपमा:
र यी उपयोगिताहरू पनि आउँछन्:
SqlSync (डाटाबेसको समिकरणको लागि प्लेटफार्म)
GeoMetadataExtractor (georeferenced तस्बिरहरू झिकिएको मेटाडाटा)
Shp2Text (फाइलहरूलाई shp मा कन्फिगर गर्दछ, समन्वयका स्तम्भहरूसँग)
Ogr2Gui (OGR टूलकिटका लागि GUI)
आकारचेककर्ता (दूषित फाईलहरूको जाँच र जाँच गर्दछ)
केवल स्थापनाकर्ता डाउनलोड गर्नुहोस्, यसलाई चलाउनुहोस् र यो स्थापना हुने ड्राइभ छनौट गर्नुहोस्। यसले एक कार्यान्वयन योग्य बनाउँदछ जसले मेनू समावेश गर्दछ, "usbgis" भनिने फोल्डरले सबै प्रोग्रामहरू समावेश गर्दछ, र साथै एक autorun.info फाइल।
जब युएसबी जडित हुन्छ, "सेटअप पोर्टेबल जीआईएस" कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्दछ, जसले गर्दा प्रणाली अन्वेषकले डिस्कमा तोक्नुभएको मार्ग पहिचान गर्दछ। यस पछि, यो केवल कार्यक्रमहरू, अवधि प्रयोग गर्न को लागी हो। यो नेटबुक प्रकार कम्प्युटरहरूको साथ काम गर्नका लागि उपयुक्त देखिन्छ, वा कुनै निश्चित कम्प्युटर बिना अफिसहरू बीच यात्रा गर्दा वा यात्रा गर्दा स्मृतिको वरिपरि हिंड्नको लागि।
एउटा सबै भन्दा ठुलो आकर्षण सर्भर-प्रकारका एप्लिकेसनहरू छन्, अप्टअप वा जोस्सेभरको मामलाको लागि, जुन पहिलो पटक मात्र स्थापना गर्न सिक्नको लागी एक लामो समय लाग्छ; यस अवस्थामा यो तिनीहरूलाई "सुरूवात" वा "रोक्नुहोस्" बटन थिच्न मात्र आवश्यक पर्दछ।
OpenLayers, Tilecache र विशेषताहरू प्रोग्रामहरू index.html फाइलबाट चल्छ, एकपटक Apache सर्भर उठाइयो (एक पटक http://localhost).
QGis को मामला मा, यसले घास समावेश गर्दछ, तपाईंले भर्खरै यो डाइरेक्टरी छान्नुपर्नेछ जब यसलाई पहिलो पटक कार्यान्वयन गर्ने (.. \_ usbgis \_ अनुप्रयोगहरू ant क्वान्टम GIS \_ घास) हो। यो पनि आवश्यक पर्दछ यदि तपाईं अर्को कम्प्युटरमा जडान गर्नुहुन्छ र प्रणालीले ड्राइभमा अर्को नाम प्रदान गर्दछ।
पोर्टेबलजीआई GPL अन्तर्गत इजाजतपत्र हो र केवल विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमहरूमा कार्य गर्दछ।
यहाँबाट तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ.
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो होन्डुरस मा संकट ... जारी छ
अर्को पोस्ट Allallsoft, गुगल, याहू, बिंग र OSM बाट नक्सा डाउनलोड गर्नुहोस्अर्को »
१० जवाफहरू "पोर्टेबल GIS, सबै USB बाट"
धेरै धेरै धन्यवाद, यो धेरै राम्रो काम गर्दछ।
कुन संस्करण gvsig मा समावेश छ, जुन म v5.2 र v5.6 संस्करण डाउनलोड गर्दछ र यसले ल्याउँदैन। केवल qgis र मलाई फिल्टर बनाउनमा समस्या छ र यसले मलाई लेयर सम्पादन गर्न अनुमति दिदैन, के यो पोर्टेबल भएको कारणले हो?
Jaime Sanchez भन्छिन्:
म portableGIS स्थापित, तर म मात्र QGIS अन्य जीआईएस कार्यक्रम स्थापित गरिएको छैन स्थापना गरेको, कसैले किन थाह छ।
म्यानुएल वाल्डररामा भन्छिन्:
मैले सुधार गरे, मैले यो फेला पारेँ http://www.faunalia.com/usbgis
नमस्ते कोललेग, म फेरि चिलीबाट छु। क्वेरी, थाहा छैन यो लिंक कहाँ समाप्त भयो?
चिलीबाट एक गले र नमस्कार!
राम्रो, कुनै विचार छैन, यसले राम्रो काम गर्नुपर्छ।
प्रश्नहरु को एक जोडी, कितना विस्थापन?
के यो एक नक्सा एक भन्दा बढी UTM क्षेत्रमा छ?
यदि तपाईं रोड म्याप kml सम्म निर्यात गर्नुहोस् र यसलाई Google धरतीमा खोल्नुहोस्, के तपाईं विस्थापित हुनुहुन्छ?
जवाफ दिनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
बरु चल एसआरएस 900913 जो राम्रो प्रदर्शन गर्दछ मेरो सडक नक्शा संग Google नक्सा प्रयोग गरिएको छ राख्नुभएको संस्थासँग मा geoserver तर स्पेन सही नक्सा España.Como मा राख्छ म समाधान गर्न सक्नुहुन्छ ?।
कुन ढाँचामा फाइलमा प्रदर्शन गर्नु पर्छ?
जाहिराव समस्या हो, त्यसमा तपाईको सडक तह UTM मा छ र Google नक्सालाई भौगोलिक समन्वयको आवश्यकता छ।
म geoserver र openlayers संग सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। मसँग सडकहरूको तह छ जुन म नक्सा नक्साको माथि जान चाहन्छु तर भू-सर्भरले मलाई रेखाहरू राम्ररी दिंदैन, बरु लाइनहरू बिस्तारै बाहिर आउँदैन। टमक कन्सोलमा निम्न त्रुटि दिन्छ:
सम्भावित प्रयोग «Tranverse_Mercator of प्रक्षेपण यसको वैधताको क्षेत्र बाहिर।
अक्षांश को अनुमति को सीमा बाहिर छ
के कसैलाई थाहा छ के यो हुन सक्छ?
म एक पत्र (SHP फाइल विस्तार) क्वांटम संग सम्मिलित गर्न खोज्दै छु एक आधार poststoneware dtaos जीआईएस। जब फाइल सम्मिलित गर्दा निम्न त्रुटि दिन्छ:
फाइलबाट स्थानिय वस्तुहरू सम्मिलित गर्दा समस्याहरू:
C: \_ कागजातहरू र सेटिङ्हरू \_ प्रयोगकर्ता \_ डेस्कटप \_ परीक्षण \_ p_file.shp
यस SQL ​​मा कार्यान्वयन गर्दा डाटाबेसले एक त्रुटि दिएको छ:
INSERT INTO IN ER public »।» File_p »VALUES (०, '११०००० ′, I', '० ′,'0110000१.0 471.649 ′, NULL, NULL, NULL, '० ′, ... (SQL को बाँकी काटिएको)
त्रुटि: सम्बन्धको लागि नयाँ प row्क्ति «file_p check सीमा अवरोध« लागू_डिम_त_गयोम »